Cabdikariim Guuleed oo dhaliiley heshiiskii shalay lagu saxiixey Garowe
May 3, 2015 (GO)- Maalin kaddib markii ay magaalada Garowe heshiis afar geesood ah ku kala saxiixdeen Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweyneyaasha Puntland, Jubaland iyo Koonfur Galbeed, ayaa waxaa soo baxaya eedaymo loo jeedinayo heshiiskaas oo intooda badan ka imaanaya siyaasiyiinta gobollada dhexe.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Soomaaliya Cabdikariim Xuseen Guuleed, xilliganna ah murashax u taagan xilka madaxweynaha maamulka la doonayo in loo sameeyo gobollada dhexe, ayaa ka hor yimid qaar kamid ah qodobada heshiiska.
Waraysi gaar ah oo uu siiyey laanta afka-Soomaaliga ee idaacadda BBC ayuu ku dhaliiley qodobka khuseeya gobolka Mudug ee qeexaya in waqooyiga Mudug ka tirsan tahay Putland koonfurtiisuna raaci doonto maamulka gobollada dhexe.
"shirka waxan ku dhaliilayaa qodobka khuseeya maamul u sameynta gobollada dhexe...waxan u arkaa inuu yahay qodob kasoo horjeeda dastuurka, caqabadna ku ah maamul u sameynta gobollada dhexe..." ayuu yiri.
Mar la weydiiyey sida ay isaga la tahay in xalku ku jiro, wuxuu ku jawaabey:
"xalka waxan u arkaa in dadka deggen waqooyiga gobolka Mudug iyaga rabitaankooda loo daayo, haddii iyagu rabaan inay kamid noqdaan maamulka loo sameynayo Mudug iyo Galguduudna inaan la jujuubin"
Guuleed ayaa sidoo kale kasoo horjeestey guddiga cusub ee loo soo magacaabay inay maamulaan shirka Cadaado, isagoo sheegay in guddigani yahay mid aan lagu kalsoonaan karin maadaama ay soo dhiseen dad dano siyaasadeed oo gaar ah wata ayna kamid yihiin murashaxiin u taagan xilka madaxweynaha.
Dhanka kale, waxaa heshiiskii Garowe kasoo horejeestey Madaxweynaha Galmudug Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid isagoo ku tilmaamey in heshiiskaasi ahaa mid aan wax dan ahi ugu jirin bulshooyinka ku dhaqan gobollada dhexe.
Qodobka uu sida gaarka ah Qaybdiid uga soo hor jeestey ayaa ah in shirka aysan ka qayb geli karin ergooyin ka socda waqooyiga gobolka Mudug.
Heshiiskii shalay magaalada Garowe lagu gaarey oo ka koobnaa todoba qodob, waxaa ugu muhiimsanaa dhismaha ciidan qaran oo Puntland ku yeelan doonto 3000 oo askari iyo in maamulka gobollada dhexe loo sameynayaa ka koobnaan doono gobolka Galguduud iyo koonfurta gobolka Mudug.